ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 36 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 35
Buddhism asaScience →
သစ္စာဝါဒီ အသျှင်နန္ဒ၀ံသ (မဟာဝိဇ္ဇာ)ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်ဝိပဿနာ နည်းပညာ – အဆက် . . .
ဒုက္ခခပ်သိမ်း ကင်းပြတ်ငြိမ်းတဲ့အခါ ဒုက္ခ မရှိတော့တဲ့ ဒုက္ခမရှိလို့ သုခကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘောကို အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်မှ ရင့်သန်ပြီးတော့ သွားတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအခါမှာ အော် . . . ဒုက္ခကမ္ဘာ ဆိတ်သုဉ်းချုပ်ငြိမ်း တော့ သုခကို တွေ့ရတယ်။
အပျက်ကမ္ဘာ ဆိတ်သုဉ်းချုပ်ငြိမ်းတော့ မပျက်တဲ့ သဘောကို တွေ့ရတယ်။
အော် . . . နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့ရတော့ နိဗ္ဗာန်ဟာ ဘယ်လိုတုန်း၊ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ အသက်ရှင်လျက်နဲ့ သိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကျတော့ သဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်လို့ နားလည်ကြရပြီး၊ သဥပါဒိသေသဆိုတာ ယောဂီများ တရားရှာလို့ သစ္စာတရားတွေ့လိုက်ရင်ဘဲ အဲဒီ သစ္စာတရားတွေ့တဲ့ဉာဏ်က နိဗ္ဗာန်ကြီးကို ဆင်ခြင်လိုက်လို့ နိဗ္ဗာန်ကြီးကို သိတဲ့အခါမှာ အဲဒီ အသိခံရတဲ့ နိဗ္ဗာန်သည်သဥပါဒိသေသတဲ့။
ခန္ဓာကိုယ်က အသက်ရှင်လျက် ကြွင်းကျန်လျက်ရှိရက်နဲ့ တွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်၊ နောက်နိဗ္ဗာန်တမျိုးကတော့ အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်တမျိုးဘဲ။
ရုပ် နာမ်ကို ရုပ် နာမ် လို့ သိလို့ နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ် ရခဲ့တာပေါ့။
ရုပ်နာမ်ကြီးဟာ ငါ မဟုတ်ဘူး။ ငါဟာ ရုပ်နာမ် မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်နာမ်ထဲမှာ ငါ မရှိဘူး။ ငါထဲမှာ ရုပ်နာမ် မရှိဘူး။
ရုပ်နာမ်ဟာ ရုပ်နာမ်ဒုက္ခ သက်သက်ကြီးလို့သိတော့ နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ် ဒီရုပ်နာမ်ကြီး ဘာကြောင့်ဖြစ် မိုးပေါ်က ကျလာတာလား။
မဟုတ်ဘူး၊ အကြောင်းသမုဒယကြောင့် အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တတ်လို့ ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ ဆက်သွယ်မှု ဥပဒေသနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားလည်သဘောပေါက်တော့ ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်၊
အော် . . . ရုပ်နာမ်ဟာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး။ ဒီဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ယင်းနဲ့ ဒီရုပ်နာမ်ဟာ တကယ်တော့ ထာဝရ တည်မြဲနေတာ မဟုတ်သေးဘူး။ သစ္စာနယ်ပယ်က နိဗ္ဗာန်ကြီးလို မဟုတ်ဘူး။
သူဟာ ပျက်စီးနေတဲ့ မိနစ်မလပ်၊ စက္ကန့်မလပ်၊ အော် . . . ပျက်စီးနေတဲ့ တရားပါလား၊ ဆင်းရဲတဲ့ တရားပါလား၊ မပိုင်မဆိုင်တဲ့ တရားပါလားလို့ သိလိုက်တော့ ရုပ်နာမ်မှာ လည်း အဲဒီလို လက္ခဏာရေးသုံးပါး မြင်လိုက်တော့ သမ္မသနဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ယင်းနဲ့ ရုပ်နာမ်သည်ကားဆိုလျှင် တကယ်တန်းကျတော့ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ပျက်စီးတာဘဲ။ မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်၊ နောက်ဆုံးတော့ သေဆုံးရတာဘဲ။
ဒီမှာဘက် ရုပ်နာမ်ဟာ မကောင်းသေးဘူး။ နိဗ္ဗာန်ကြီးကမှ ကောင်းတာ၊ ချုပ်ငြိမ်းတာ၊ ဒီမှာဘက်ရုပ်နာမ် က ဖြစ်ပြီးပျက်တယ်လို့ အဖြစ်နဲ့ အပျက်ကို မြင်တော့ ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်။
ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် အဖြစ်နဲ့ အပျက်ကို မြင်လာပြီဆိုတော့ ယထာဘူတဉာဏ် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ဆင်ခြင်တတ်လာပြီး
ရုပ်နာမ်သည် ဖြစ်ခြင်းသဘော ရှိလာပြီဆိုလျှင် ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ယထာဘူတကျကျ ရှုသတ်ဆင်ခြင်ယင်းနဲ့ ရုပ်နာမ်သည် ရှုသတ်ပါများတော့ အို . . . တဖွးဖွားနဲ့ ပျက်နေတာဘဲ၊ မိနစ်မလပ်၊ စက္ကန့်မလပ် ပျက်နေတာဘဲ။
အော် . . . လက်စသတ်တော့ အပျက်တရားကြီးဘဲလို့ ဆင်ခြင်လိုက်တော့ ဘင်္ဂဉာဏ်။ ဘင်္ဂဉာဏ် အပျက်ကြီးမြင်တော့ ဟင် . . . ပျက်နေတဲ့ တရားကြီးပါလား၊ သင်္ချိုင်းကုန်ဆီသို့ တလှမ်းခြင်း တလှမ်းခြင်း တချိန်ထဲ သွားနေပါလားလို့ အပျက်တရားရဲ့ ဘေးဆိုးဒဏ်ခံပြီးတော့ ဘေးအန္တရာယ်ကြီးကို မြင်လိုက်တော့ ဘယဉာဏ်
ဘယဉာဏ် မြင်ပါများလာတော့ လက်စသတ်တော့ ဒီဘေးကြီးသည် ကြောက်ပြီး လန့်ပြီး စိုးရိမ်ပြီး အာဒီန၀ဉာဏ် ရွံ့ကြောက်ပြီး ရွံ့ကြောက်ယင်းနဲ့ ဒီရုပ်နာမ် ပျက်စီးနေတဲ့ ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ နှိပ်စက်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝကို မြင်တော့ သူ့ကို မလိုချင်တော့ပါဘူး။
မုန်းပြီး ငြီးငွေ့ပြီးဆိုတော့ ငြီးငွေ့တော့ နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ် ငြီးငွေ့တော့ ဒီရုပ်နာမ်ကြီး မလိုချင်လျှင် ဒီရုပ်နာမ်ကြီးမှ ထွက်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့။
ထွက်ချင်တဲ့ သဘောဝင်လာတော့ မုဉ္စိတုကမျတ္တဉာဏ်၊ မုဉ္စိတုကမျတ္တဉာဏ် ၀င်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ရုပ်နာမ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ ပဋိသင်္ခါဉာဏ်။
အော် . . . လက်စသတ်တော့ ဒီရုပ်နာမ်သည် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးတုန်းကလည်း စိတ်တွေ ရုပ်တွေ ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံတွေဖြစ်ပြီး ပျက်ခဲ့၊ လူလတ်ပိုင်း အချိန်မှာလည်း ဖြစ်ပြီးပျက်ခဲ့ ဖြစ်ပြီးပျက်ခဲ့၊။
အော် . . . အခု အချိန်ပိုင်းလည်း ဖြစ်ပြီးပျက်နေတာပါဘဲလား။ ဒီတော့ ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိပြီး ပျက်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ အနိစ္စလက္ခဏာ။ ဒုက္ခလက္ခဏာ၊ အနတ္တလက္ခဏာရယ်လို့ လက္ခဏာရေးသုံးပါး အသေးစိတ်မြင်တော့ ပဋိသင်္ခါဉာဏ်၊ သင်္ခါရူပေက္ခဉာဏ်။
အော် . . . ကောင်းဆိုးနှစ်တန် မိမိက သွားပြီး မှီခိုလို့မဖြစ်ဘူး၊ ကောင်းဆိုးနှစ်ဖြာ ထိုအရာ အိုနာသေ၍ နေတော့မယ်လို့ သင်္ခါရတွေ ဥပေက္ခာပြုတော့ ဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာ ၀မ်းနဲခြင်း ၀မ်းသာခြင်းကို အလိုမရှိတော့ဘဲနဲ့ သင်္ခါရ ဥပေက္ခပြုတော့ သင်္ခါရူပေက္ခာဉာဏ်၊ သင်္ခါရူပေက္ခာဉာဏ်ကနေပြီး ဆင်ခြင်ယင်းနဲ့ ရင့်ကျက်လာတော့ အနုလောမဉာဏ် အနုလုံပဋိလုံဆင်ခြင်ပြီး သစ္စာတရားကို တွေ့တော့မယ်နော်၊ ဉာဏ်ကထက်ထက်လာပြီ။
အော် . . .လက်စသတ်တော့ ရုပ်နာမ်ကြီး ဒုက္ခဖြစ်တယ်၊ ရုပ်နာမ်ကြီး ဒုက္ခဖြစ်တော့ အ၀ိဇ္ဇာဦးစီးတယ်၊ အ၀ိဇ္ဇာ ဦးစီးတော့ တဏှာကပ်တယ်။ တဏှာကပ်တော့ ဒုက္ခလိုချင်တယ်။ ဒုက္ခလိုချင်တော့ ဒုက္ခရအောင် ပြုလုပ်တယ်။ ဒုက္ခရအောင်ပြုလုပ်တော့ ဒုက္ခကြီးရ၊ ဒုက္ခကြီးရတော့ ခံစားရတယ်။ ပင်ပန်းလိုက်တာ၊ ဆင်းရဲလိုက်တာ၊ နွမ်းနယ်လိုက်တာ၊ နှိပ်စက်ခြင်းဒဏ် ခံရထားတဲ့ ၀ဋ်ကောင်ကြီးပါလား။
ဒီ ၀ဋ်ကောင်ကြီးက လွတ်အောင်ရုန်းမှဘဲ၊ လွတ်အောင်ရုန်းမှ သစ္စာတရားကို တွေ့မှာဘဲလို့ အနုလုံ ပဋိလုံနဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်တော့ အနုလောမဉာဏ်က တခါထဲပေါ် လက်စသတ်တော့ ဒီပုထုဇဉ်စရိုက်ဆိုးကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးဖို့တော်ပြီ။
အဲဒီလို ဒီ ပုထုဇဉ်စိုက်ဆိုးမှ တခါထဲ အရိယာစရိုက်သို့ ကူးပြောင်းမဲ့အတွက် ခုန်ပြီး လှန်ပြီး ကူးပြောင်း မဟဲ့လို့ ဂေါတြဘူဉာဏ်ကနေပြီး။
ဟေ့ . . . ရုပ်နာမ်ကြီး ပျက်တဲ့တရားကြီး၊ ပျက်တာ မင်းဟာမင်းပျက်တာ နေခဲ့တော့၊ မင်းကို မမှီခိုတော့ ဘူး။ မင်းကို မတပ်မက်တော့ဘူး၊ မင်းကို မကပ်ငြိတော့ဘူး၊ မင်းနဲ့ငါ အိုးစားကွဲပြီလေ။
ဖြတ်ချလိုက်၊ ဖြတ်ရဲတောက်ရဲတော့ ကြည်လင်ထက်မြက်တဲ့ ဒီ မဂ်ဉာဏ်သည်ကားဆိုလျှင် မဂ်ဉာဏ်မှ ဖိုလ်ဉာဏ်သို့ ကူးတော့ ဖိုလ်ဉာဏ်မှ အေးငြိမ်းချမ်းသာပြီး ထိုးထွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပစ္စ၀က္ခဏာဉာဏ် ဆင်ခြင်လိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ၊ သစ္စာတံခါးကြီးပွင့်ပြီ။
လက်စသတ်တော့ မဂ်ဉာဏ်ဆိုတာ ဒီလိုဘဲ၊ ကြည်လင်တယ်၊ ထက်မြက်တယ်၊ ပြတ်သားတယ်၊ ပိုင်းဖြတ်နိုင်တယ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်သည် ဒီလိုဘဲ ထိုးထွင်းနိုင်တယ်၊ အေးမြတယ်၊ ချမ်းသာတယ်၊ ဆင်ခြင်နိုင်တယ်။
နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာ ဒီလိုဘဲ ချမ်းသာမျိုးစုံ စုပုံလျက်ပါတကား။ မတွေ့ဘူးတဲ့ ချမ်းသာတွေ၊ မခံစားဘူးတဲ့ ချမ်းသာတွေကို ခံစားရတာကတော့ နိဗ္ဗာန်နန်းမှာ ပါတကား။
ခံစားရတယ် ဆိုပေမဲ့ ရုပ်နာမ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားတဲ့ အတုချမ်းသာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ တကယ့်ကို စစ်မှန်စင်ကြယ် ကြည်လင်ပြီးတဲ့နောက် တဏှာတွေ ကုန်ခန်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ချမ်းသာမှုမျိုး သန္တိသုခ ရသမဟာ စစ်မှန်တဲ့ ချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်မှာ တွေ့ရပါကလား။
နိဗ္ဗာန်မှာမှ `နိဗ္ဗာနံ ပန လောကုတ္တရ သင်္ခတံ´ သင်္ခတ လောကကြီးက လွန်မြောက်လာတဲ့ ဒီနိဗ္ဗာန်သည် ငြိမ်းချမ်းမှု အစုစုတို့ကို တွေ့နိုင်လို့ စိတ်ငြိမ်လျက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောမှ ချမ်းသာတဲ့ သဘောမှ တရံတဆစ်မှ မရွေ့လျားဘူးတဲ့။
ချမ်းသာပြီးယင်း ချမ်းသာယင်း၊ နိဗ္ဗာန်ကို ဆင်ခြင်လို့ရှိရင်တော့ ချမ်းသာပြီးယင်း ချမ်းသာယင်း၊ ချမ်းသာခြင်း မျိုးစုံသာ စုပုံပြီး တွေ့ရတဲ့သဘောဘဲ။
အင်မတန် ချမ်းသာတဲ့ ချမ်းသာစစ် ချမ်းသာမှန် ဧကန် တွေ့ရပြီလို့၊ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်တော့။
အော် . . .မိမိသည် သစ္စာတရားကြီးကို မတွေ့ခင်က ကပ်ငြိခဲ့တဲ့ ဒိဋ္ဌိတွေ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာတွေ အခုပယ် လိုက်ပြီ၊ ပြီးပါရောလား၊ အော် . . . ငါ့ရုပ် ငါ့နာမ်လို့ မယူတော့ဘူး။
ရုပ်နာမ်ကြီးဟာ အပျက်တရားကြီးလို့ သိသွားပြီး၊ ရတနာမြတ်သုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပြီး၊ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာမြတ်သုံးပါးအား သံသယ မဖြစ်တော့ဘူး။
သဗ္ဗေညုတ ရွှေဉာဏ်တော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ အင်မတန်မှ ကြည်ညိုစရာ ကောင်းတဲ့ အရဟံ လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူထိုက်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားပါကလား။
မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးသည် အင်မတန်မှ ကြီးမားလှပါတကား။ တရားတော်မြတ်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးသည်လည်း ဤကဲ့သို့သော သစ္စာတရား တွေ့သိခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သဘောကို ဤတရားသည် ပေးသဖြင့် တရားတော်မြတ်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကလည်း အင်မတန်မှ ကြီးမားပါကလား။
အော် . . . အရိယာ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တွေလဲ ဒီလမ်းစဉ် လျှောက်သွားတော်မူကြတာဘဲ။ သစ္စာ တရားတွေ့ရှိပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းတော် မူကြတယ်။
အားကျစရာကောင်း၊ ကြည်ညိုစရာကောင်း၊ လေးစားစရာကောင်း၊ မြတ်နိုးစရာကောင်း၊ ဦးထိပ်မှာ ပန်ဆင်စရာကောင်းတဲ့ တကယ့်အာဇာနည်၊ အာဇာနည် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး သာသနာ့ အကျိုးဆောင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေက အင်မတန်မှ ကြည်ညိုစရာ ကောင်းပါဘဲကလားဆိုပြီး ရတနာမြတ်သုံးပါး ဦထိပ်မှာ ထားပြီးတဲ့နောက် မိမိသည် ရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ိစိကိစ္ဆာ သို့လောသို့လောမဖြစ် ရုပ်နာမ်အပျက်ကို ပိုင်းခြားထင်ထင် ဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးတော့ ပယ်စွန်လိုက်တဲ့ ဒီဒိဋ္ဌိတွေ ဒီဝိစိကိစ္ဆာတွေ ဒီကိလေသာတွေ အကြောင်းကိုသိ မပယ်ရသေးလို့ ကြွင်းကျန်နေရင်လည်း ကြွင်းကျန်နေသေးတဲ့ ကိလေသာတွေအကြောင်းကို သိတဲ့ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်တော့မှ . . . ။
အော် . . .သစ္စာတရားရဲ့ နယ်ပယ်ဟာ အင်မတန် ငြိမ်းချမ်းလွန်းလို့ တသံသရာလုံးက ပုထုဇဉ် စရိုက်ဆိုးတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မကြုံဘူးတဲ့ အဖိုးတန်လှတဲ့ အဖိုးနဂ္ဂထိုက်တဲ့ ချမ်းသာခြင်းကိုတော့ ဤမှာဘက် လောကုတ္တရာမှာသာ စံမြန်းနိုင်ပြီလို့ ထိုမဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ် ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်တွေနဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဘဲ သစ္စာတရား တွေ့ရှိသွားပြီ။ သစ္စာတရား တွေ့ရှိသွားပြီဆိုတော့ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံကြီးကို ပြန်စောင်းတောင် မကြည့်ချင်တော့ဘူးတဲ့။
ဒီ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံကြီးကို ကြည့်စမ်းပါဦး . . . လောဘမီးတွေ ဒေါသမီးတွေ မောဟမီးတွေ တဟုန်းဟုန်းတောက် နေလိုက်တာ။
တဏှာ ရောဂါ ရေစီးချောင်းထဲ နစ်မျောနေလိုက်တာ။
အိုလိုက် နာလိုက် သေလိုက် သေခြင်းဘေး အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံနေရ၊ လောကဓံ အမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့နေရတဲ့ ဒီ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ အပူမီးလောင်မြိုက်ပြီး ရာဂမီးတွေ လောင်မြိုက်နေတဲ့ ဒီ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံကြီးကို ပြန်စောင်း မလှည့်ကြည့်ချင်တော့ဘဲနဲ့ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံက လွတ်မြောက်ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ အင်မတန် ငြိမ်းချမ်းသော သာယာသော ချမ်းသာသော ကြည်နူးဘွယ် အတိပြီးသော ပညာဖြင့်သာလျှင် ချမ်းသာ၍ ဉာဏ်ပညာဖြင့်သာ ကြည်နူးဘွယ်အတိပြီးသော အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာ ကောင်းလှသော ငြိမ်းချမ်းလှသော နူးညံ့သော သိမ်မွေ့သော အသိခက်သော နှိုင်းခိုင်းစရာ ဥပမာ ဤမှာဘက် လောကီဘက်မှာ မရှိသော အမြတ်တကာ့ အမြတ်ဆုံး မိမိထက် ထပ်တူထပ်မျှ မြတ်တဲ့တရားရယ်လို့ အဲဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်စရာ မရှိထသော အသင်္ခတတည်းဟူသော ကံတွေ စိတ်တွေ ဥတုတွေ အာဟာရတွေ ပြုပြင်စီရင်လို့မရသော မည်ကဲ့သို့သော အကြောင်းခံတရားကမှ အကျိုးဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိသော မိမိပကတိ ထူးဆန်းအံ့သြဘွယ်ရာ ပရမတ္ထအားဖြင့် အထင်အရှား သိမ်မွေ့စွာဖြင့် တည်ရှိနေသော အမှန်တကယ် တွေ့မြင်နိုင်သော ဆင်ခြင်နိုင်သော တရားကြီးကို ဒီ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်တွေနဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး တွေ့သိလိုက်တယ် ဆိုမှတော့ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံမှ ကျွတ်လွတ်ပြီဖြစ်၍ ထိုနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့ အေးမြတဲ့ ဓာတ်ကို ထိုသစ္စာတရားတွေ့တဲ့ ဉာဏ်ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့သည် ထိုငြိမ်းအေးတဲ့ ဓာတ် သဘာဝကို စံမြန်းနိုင်ကြတယ်။
ရင်ထဲ နောက်ထပ်တဖန် သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ ပြန်လည်၍ မလည်ရအောင် ဟင်္သာတို့သည် ကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ရေအိုင်မှာဘဲ ပျော်မြူးကြသလိုဘဲ သမုဒ္ဒရာတို့မည်သည် မြစ်ကြီးငါးသွယ် မြစ်ငယ်ငါးရာ ချောင်းအဖြာဖြာက စီးဆင်းတဲ့ ရေတွေကို တော်ပြီ တန်ပြီ မစီးတော့နဲ့ ရောင့်ရဲပြီ တင်းတိမ်ပြီလို့ မဆိုသလိုဘဲ ဒီသစ္စာတရား တွေ့သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တို့သည် နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ပြီး ထိုးထွင်း မျက်မှောက်ပြုပြီး ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီး ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်သက်ဝင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်သောအခါမှ ရောင့်ရဲတယ်၊ တင်းတိမ်တယ် မရှိဘူး။ ဒီလို ရောင့်ရဲခြင်း တင်းတိမ်ခြင်း မရှိနိုင်တဲ့ ဉာဏ်ပညာရှင်တွေ ဆင်ခြင်တဲ့ အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်လမ်းကို စံမြန်းဘို့ရာအတွက် မိမိတို့သည် ရှေးဦးစွာ ၀ိပဿနာ နည်းပညာကို သိထား၍ ၀ိပဿနာ ကျင့်စဉ်အတိုင်း မိမိခန္ဓာ ဉာဏ်ရောက်၍ ရှုသတ်ရမည်။
ထိုကဲ့သို့ ၀ိပဿနာနှင့် ပိုင်းဖြတ်ရှုသတ်လို့ မိမိမှာ အရိယာ ဉာဏ်မျက်လုံး ရပြီဆိုတော့ အရိယာ ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ ရရှိထားတဲ့ ရုပ်နာမ်ကို အပျက်မြင်လျှင် မဂ္ဂင်လမ်း ပွင့်စေတဲ့ ၀ိပဿနာ နည်းပညာ ကျင့်စဉ် အစစ်ပါဘဲ။
သာဓု . . . သာဓု . . . သာဓု . . .။
ကျေးဇူးတင်ပါသည် – Admin (www.chitnge.com)